Haweenay karsatay hilbaha ninkeeda | gobolada.com
Haweenay u dhalatay dalka Marooko ayaa lagu eedeeyay inay dishay nin ay xiriir jeceyl uu kala dhaxeeyay islamarkana ay hilibkiisa karsatay.
Hilibka ninkan Jaceylka kala dhaxeeyay ayaa la sheegay in inta ay karisay ay siisay shaqaale Pakistaaniyin ah oo ka howlgala dalka Imaaraadka.
Haweenaydan ayaa dishay ninka ay saaxibka ahaayeen saddex bilood ka hor,sida ay booliiska sheegeen,balse waxaa la ogaaday dambigan dhawaan.
Dilka ninkan ayaa la ogaaday ka dib markii ilko bina’aadam laga dhex helay makiinada lagu shiido khudaarta.
Markii ay booliiska gacanta ku dhigeen ayay haweenaydan qiratay dambigeeda,waxa ayna ku tilmaamtay ficilka ay samaysay in uu ahaa”mid doqonnimo ah”, sida uu qoray wargeyska The National ee ay dowladda Imaaaraadka leedahay.
Haweenaydan oo ah 30 jir ayaa lagu wadaa in maxkamad la soo taago iyada oo ay wali baaritaanada socdaan.
Ninka ay dishay islamarkana ay hilibkiisa karsatay ayaa waxa ay xiriir la lahayd haweenaydan 7 sano.
Sida uu qoray wargayska The National, haweenaydan ayaa ninkan dishay ka dib markii uu u sheegay in uu qorshaynayo in uu guursado haweenay kale oo ka soo jeeda dalka Moroko.
Booliiska ma aysan shaacin qaabkii lagu dilay ninkan,waxa ayna sheegeen in gabadhan uu saaxibka la ahaa ay maydkiisa inta ay ku karisay Bariis islamarkana ay siisay dad Pakistaaniyiin ah oo ka shaqaynayay goob ku dhaw guriga.
Arrintan ayaa la ogaaday ka dib markii ninka la dilay walaalkiis uu ka soo raadiyay gurigiisa oo ku yaalla magaalada Al Ain, oo ku taalla xudduuda dalka Cumaan.
Ninka la dilay walaalkii ayaa ka dib waxa uu ilko bina’aadam ka helay makiinada lagu shiido khudaarta, sida uu qoray wargayska dowladda Imaaraadka.
Ninka la dilay walaalkii ayaa ka dib booliiska ku wargaliyay in walaalkii la la’yahay islamarkana waxaa dhiigda DNA laga qaaday ilkihii la helay markaasi oo la xaqiijiyay in ilkahani ay yihiin kuwii ninka maqan.
Sida ay booliiska sheegeen haweenaydan ayaa markii hore ninka la dilay walaalkii u sheegtay in guriga ay ka ceyrisay.
Balse haweenaydan markii ay booliiska su’aalo waydiiyeen ayay taagnida ka dhacday markaasi oo ay qiratay dilka ninka ay saaxibka ahaayeen.
Waxay sheegtay in saaxibadeed ay ka caawiyeen in guriga ay ka nadiifiso haraadiga ka dib dilka.
Haweenaydan lagu eedeeyay dilka ayaa la sheegay in isbataalka loo diray si maskx ahaan loo baaro in ay caafimaad qabto.